Ọhaneze Ndị Igbo Akpọọla Òkù Ka A Hazigharịa Ọnọdụ Ala Nigeria
Ọkpọkpọ oku a, mkpebi a na nkwekọrịta a bụ nke e mere na nnukwu ọgbakọ izugbe a chịkọbara site n'aka otu Ọhaneze Ndị Igbo, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ ụbọchị Mọnde gara aga n'ama egwuregwu Alex Ekwueme dị n'Awka, bụ isi obodo steeti Anambra.
N'okwu ya n'ọgbakọ ahụ, onyeisi oche Ọhaneze Ndị Igbo n'ala Nigeria, bụ maazị Nnịa Nwodo katọrọ etu e si eme a họrọ ụmụ ụmụ e gbuo ha ichi ma họrọ ụmụ ụmụ chie ha ọzọ n'usoro ọchịchị na usoro e si ekesà ihe a na-enweta n'ala anyị, kọwaa nke ahụ dịka mkpàgide na imekpà ahụ, ma sịkwazie na ọ bụ ajọ ọnọdụ ahụ na ajọ ọnọdụ ndị ọzọ ndị Igbo na-agabiga n'ala Nigeria mere e jiri chịkọba ya bụ ọgbakọ.
Na mbụ n'okwu ya, onyeisi oche n'ọgbakọ ahụ, bụ Chiifu Emmanuel Iwuanyanwụ kwuru na amaghị egwu ala bụ aghụghọ n'ihi na ọ bụ eziokwu a hụrụ anya ma bụrụkwa ihe doro ewu na ọkụkọ anya na ihe amaghị kwụrụ n'ala anyị ugbu a, n'akụkụ ọbụla ma ọ bụ n'ụzọ ọbụla e siri tụlee ya.
Ọ kọrọ akụkọ otu e siri gbusi ndị Igbo tupuu na n'oge agha Biafra, kọọ ụzọ dị iche iche e si emegide ndị Igbo n'ala anyị ugbu a, katọọ mgbusi ahụ a na-egbusi ndị mmadụ na mpaghara ebe dị iche iche n'ala Nigeria, kọwaa na nke ahụ na-egosi na ọnọdụ ala anyị ugbu a adịghị ntị mma, ma na-egosikwa na gọọmenti etiti bụ ụrụhụ tarakwụ na okenye nọ n'ụlọ ma ewu amụọ n'ọgbụ.
N'ozi ọ gụpụtara dịka ọnọdụ, mkpebi na nkwekọrịta ndị igbo n'ebe o metụtara ịhazigharị ala Nigeria ugbu a, onyeisi oche kọmitii haziri mmemme ahụ, ma bụrụka onyeisi ụlọ ọba ego ala anyị n'oge gara aga, bụ ọkammụta Chukwuma Soludo kpọpụtara ihe iri bụ ebumnobi na ọchịchọ ndị Igbo n'ebe o metụtara ọnọdụ ala anyị ugbu a. Na nke nke, ihe ndị a gụnyere:
1. A ga-wepụta ohere ebe ụmụafọ Nigeria sitere na mpaghara ebe dị iche iche ga-ezukọ ọnụ wee wepụta atụmatụ iwu ọhụụ a ga-eji chị ala anyị.
2. Ka e nwee mnwogharị n'usoro ọchịchị ala anyị, ebe mpaghara na steeti dị iche iche ga-eji aka ha họrọ usoro ọchịchị ha chọrọ. Ka e nwekwa osote onyeisi ala dị ise n'ọnụ ọgụgụ, ma bụrụkwa ndị ga-esite mpaghara ise n'ala anyị ma e wezuga mpaghara nke onyeisi ala si na ya pụta.
3. Ka e nwee isi ọchịchị isii n'ala anyị, nke pụtara na mpaghara ọbụla ga-enwe gọọmenti nke ya ma nweekwa akwụkwọ iwu nke ya. Ka e lebagharịa anya n'ụzọ e si ekesa ihe a na-enweta n'ala anyị, ma kewapụtakwuo ụfọdụ steeti na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ ala anyị, dịka ọ dị na nkwekọrịta e nwere n'ọgbakọ izugbe e mere n'ala anyị n'ahọ 2014.
4. Ka e nwee isi nhàtá nhà na mpaghara niile na steeti niile n'oge a ga-enwe isi ọchịchị na mpaghara dị iche iche.
5. Ka a gbanwee "kedụ steeti ebe o sì?" Ka ọ bụrụzie "Kedụ steeti ebe o bì?" n'akwụkwọ iwu ala anyị.
6. Ka steeti ọbụla na gọọmenti etiti nwee ndị ọrụ uwe ojii nke ha iche iche; ma ọ bụ ka steeti ọbụla, mapaghara ọbụla na gọọmenti etiti nwee ndị ọrụ uwe ojii nke ha iche iche.
7. Ka steeti ọbụla were aka ha na-elekọta ihe onwunwe ha na akụnụba ndị ọzọ Chukwu jiri gọzie ha, karịa gọọmenti etiti ịchịkọrọ ma kpàchido ihe niile.
8. Ka a gbanwèé òtù ahụ na-ahụ na e nyere mmadụ ọrụ site n'ilekwàsị anya na mpaghara ebe o si, ka ọ bụrụzie otu na-ahụ na e nyere onye ọbụla ohere inweta ọrụ, ma na-ahụkwa na-enye mmadụ ọrụ site n'ịgbadó ụkwụ na onye ahụ bụ onye tozuru okè ma nwekwa ihe niile a chọrọ iji rụ ọrụ ahụ.
9. Ka otu ga na-achịkọba nhọpụta n'ogoogo gọọmenti etiti bụrụ otu gọọmenti etiti nwè, ebe mpaghara ma ọ bụ steeti ọbụla ga-enwe òtu ga na-ahụ maka nhọpụ n'ogoogo steeti ma ọ bụ mpaghara.
10. Ka mpaghara ọbụla nwee ụlọ ikpe nke aka ha, ọ kachasị dịka o siri metụta ụlọ ikpe mkpegharị na ụlọ ikpe e jechaa ọ gwụ/ụlọ ikpe kacha elu.
Na mbụ n'ozi nnọọ ya, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ, bụ onye a nọrọ na steeti ya wee mee ọgbakọ ahụ kèlèrè ọhaneze ndị bịara oke ọgbakọ ahụ, kọwaa ya dịka nke bịara n'oge a chọrọ ya nke ukwu, kwupụta ọtụtụ mkpa ọ dị ịhazigharị ọnọdụ ala anyị, ma gosipụtakwa ezi olile anya o nwere na mpụtara ọgbakọ ahụ ga-eweta ezi mgbanwe a tụrụ anya ya n'ọnọdụ ala anyị.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere maazị osote onyeisi ụlọ ọgbakọ sineeti ala anyị, bụ maazị Ike Ekweremadụ onye kwere nkwa na ha ga-atụpụta ma mee ka e guzobe òtù nkwalite mmepe mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ ala anyị; Oriakụ Bianca, bụ nwunye Dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu lagoro mmụọ; onye ndu Afenifere, bụ Chiifu Ayọ Adebanjọ, onye ndu mpaghara Middle Belt, bụ maazị Dan Sulaiman, onye ndu selitere isi na mpaghara ndịda ndịda anyanwụ, bụ Chiifu Edwin Clark; ndị isi otu jikọtara ndị eze ọdịnala na steeti niile nke mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ ala anyị, ndị eze ọdịnala, ndị ndu ụka, ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu, tinyere imirikiti ndị ọzọ.